Websagaaro | allsanaag
Dhaqanka miyiga oo ah gundhigga dhaqanka iyo caadooyinka ummadda soomaaliyeed, yaa waxaa ka mid ah ciyaar ay wada ciyaaraan qoyska oo dhami.
Carruurta xoolaha la jirtay maalintii, markay xoolaha soo hooyaan fiidkii, inta cashaddu ay bislaanayso ama xoolaha la li’sayo, si aanay carruurtu uga seexan cashadda yaa waxaa la ciyaaraa ciyaartan (WEB DHEH ), Waxana loo ciyaaraa sidan:
Hadba ilmaha luloodda yaa dhegta inta la maroojiyo yaa loo dhihi WEBDHEH, markaasuu ilmuhu oran WEB, hadana waxaa loo dhihi WEBSAGAARO, ilmuhu wuxuu ka daba oron WEBSAGAARO, hadana waxaa ilmaha lagu oran YAAD KU EERATAY? Ilmuhu wuxuu ku jawaabi HEBBEL (qof agtiisa fadhiya ayuu maggaciisa sheegi, sida aabe hooyo ama walaal), ruuxii ilmaha dhegta maroojinayay, yaa wuxuu weydiin ruuxii ilmuhu ku eertay su’aasha oranaysa MA KA GOOYAA MISE WAA U DAAYAA? Hadii ay jawaabtu noqoto u daa, Markaa qofkii ilmaha dhegta maroojinayay wuu sii daayaa dhegtii ilmaha ee uu maroojinayey. Hadiise ay jawaabtu noqoto ka GOY, ilmaha dhegtaa aad loo maroojiyaa. Ciyaartan macneheedu waa in aanay carruurtu cashadda ka seexan.
Runtii Alleheena weyn (swt) wuxuu xallaalleeyay QABIILKA si laysu aqooddo ummaddina u samaysanto. Addammaha runtii waxaa laggu intixaamay SHAYDAANKA. Sidoo kale, QABIILKA waxaa laggu intixaamay QABYAALLADDA. Shaydaanka Alleheena weyn yaa laga hoos galaa. Qabyaalladdana waxaa laga hoos galaa Qaranka iyo Aqoonta. Shaydaanka iyo eex-da qabyaaladeed waa laynooga digey labadaba sidda qura’anka ku cad. Sidoo kale, deriska iyo dadka degaanka wada galaa xaq iyo xuquuq diimeed iyo mid dhaqanba waa is ku leeyihiin, sida Alle (swt) iyo Rasuulkuba (scw) innoo sheegeen.
Markii Warsangeli Habar -Awal dhegta maroojisay oo lagu yiri yaad ku eeretay, waxay sheegteen Habar-majeerteen, markii la wey-diiyayna waxay ku jawaabeen ka Goooy.
Sidoo kale, markii Habar-yoonis Habar-awal dhegta maroojisay oo loo yiri yaad ku eeratay, waxay sheegteen Habar-jeclo, waxayna ku jawaabeen ka gooy.
Markii Habar-majeerteen Dhulbahante dhegta maroojeen, waxaa loo yiri yaad ku eeratay, waxayna ku eerteen Habar-awal, waxayna ku jawaabeen ka gooy.
Ayaantaan ifafaalaha siyaasadeed waxay sheegayaan in ay keceen oo soo baraarugeen kuwii dhegaha laga furays-tay waa Warsan-geli, Habaryoonis iyo Dhulbahante oo ay iyagu markaan isku eeranayaan.
Waxay u muuqatey in ay markii hore il-duufeen, oo uu ka adkaaday nin jeclaysi iyo qabyaallad, labadaasna madhaxoodda waa garan karnaa. Waxaa hubaal ah, in hadii ay isku tashadaan saddexdan wada degaa, in Allena u hiilanayo horuumar iyo nabbadna ay gaadhayaan.
Waxaan uga golleeyahay hadii ay sadexdaa deriska iyo degaanka wadaagaa MAAMUL-GOBOLEED yagleelaan, cidna ma baryi doonaan. Bal eeg murqaanka iyo QAADKA hareed iyo gal-gala ka baxa, bal eeg khudrada iyo nafaqada ka baxda Midhishi, Cal-madow, Dayaxa, Ceergaabo iyo Jiidali, bal eeg Xoolaha Geel iyo adhiba leh ee daaqa soolasha Bilcil, Xaabooyin, Soolbaayaal, Ardaa, Qodqod iyo qayraa, Beerweeso, Dooxooyinka Laascanood, Karamaan, Xudun oogo, Dhagax labaasood, Buurku maris, Gargaraley, bal eeg xeebta dhererkeedu dhaafay 600km ilaa Boosaaso, Ceelaayo, Durduri, Lasqoray, Xiis iyo maydh, bal eeg shidaalka jiifa Buraan, Holhol iyo xeebta Laasqoray.
Bal eeg BUURTA SURAD ee ka mid ah buuraha ugu dheer Afrika, khayraadka iyo waxa ka baxa sida: Maydigga, Beeyadda, moxogga, deyibta, beeraha haysta biyaha durdurka, sida durdurka dalyare, Boocame, Bir table, Yaaheel, iku daramo, bal eeg, bal eeg, nimcada taala ee ilahay ku manaystay tiro laguma koobo’e.
Xoolaha sool iyo Sanaag laga soo ururiyo sanadkii waa ka badan yihiin 1,000,000 oo neef, waxaana laga dhoofiyaa oo lagu cashuuraa Boosaaso iyo Berbera, addeegyo goboladdaa loo fidiyo iska daaye waxaa u dheer xaqiraad iyo dheg-maroojin. Buuraha biliiliqada ka socota xisaab iyo caddad midna ma leh.
Isku soo wadda duuboo, Caasimaddu waa CEERGAABO, Dekedu waa MAYDH, Wadaddu TABCA, MADAX WEYNUHU waa meerto, xildhibaanadda shacabkaa dooranaya.
Muxuu yiri “Dadku waa wadda Ciise, Ciisenna dadka kale caannad ma dheera”.
← Sharciga Doorashooyinka Qaranka ee Heer Federaal Karaash Oo Shir-guddoomiyey Shirka Golaha Wasiirada →